Friday 14th February 2020 07:54:45 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Dhaleceynta uu u jeediyay Madaxweynaha ayaa timid xilli isha lagu hayo sida waaxda cadaaladda ee Mareykanka ay ula tacaamusho kiis la xiriira Roger Stone oo la taliye u ahaa madaxweyne Donald Trump balse la xukumay Xeer ilaalinta ayaa lagu eedeeyay inay u liiceen cadaadis uga imanayay madaxweyne Donald Trump.
Hadalka xeer ilaaliyaha guud ayaa u muuqda mid uu kaga careysan yahay hab dhaqanka xafiiska madaxweynaha, waxaana uu yiri "Waxay ila tahay in la joogo xilligii la joojin lahaa in barta Tweeter-ka wax lagaga sheego waaxda cadaaladda" "Ma qabsan karo shaqadeyda cadaaladda iyadoo marwalba wax laga sheegayo, taas oo minja xaabineysa hawlaha aan hayo," ayuu raaciyay.
Hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka sare ee senetka, Mitch McConnell ayaa sheegay in Madaxweynaha looga baahan yahay in uu dhageysto hadalka xeer ilaaliyaha. "Haddii xeer ilaaliyaha uu yirahdo waxay saameneysaa qaabka uu u shaqeeyo, madaxweynaha waxaa looga baahan yahay in uu dhagesyto",ayuu yiri.
Mr Roger Stone ayaa la xukumay bishii Nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay, kadib markii lagu helay in uu ku lug lahaa faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka iyo in uu ka tallaabsaday sharciga Mareykanka Xeer ilaalinta heer federal ayaa markii hore soo jeediyay in Mr Roger Stone lagu xukumo 7 ilaa iyo 9 sano, haseyeeshee soo jeedintaas ayaa waxaa markiiba kasoo horjeestay madaxweyne Donald Trump oo sheegay inay tahay wax lala yaabo oo caddaalad darro ah.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaase ku gacan seyrtay soo jeedinta xeer ilaalinta federaalka, taas oo dhalisay su'aal ah in Mr Bar uu farageliyay cadaaladda isagoo ka duulaya hadalkii Trump Xeer ilaaliyeyaasha soo jeediyay xukunka Mr Stone ayaa markii dambe isaga tegay shaqada.
Mr Bar ayaa sidoo kale sheegay in aysan dhici doonin in ay saameyn ku yeeshaan Kongreska, madaxda warbaahinta iyo madaxweynaha, wuxuuna intaa ku daray in uu rajeynayo in Mr Trump uu ixtiraami doona shaqadiisa Xeer ilaaliye William Bar ayaa shaqadan loo magacaabay bishii Febraayo ee sanadkii hore, waxaana xilligaas loo arkayay in ay aad isugu dhaw yihiin madaxweyne Donald Trump.